Madaxweynaha Puntland oo u safray Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo u safray Muqdisho
February 5, 2017 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha Puntland oo u safray Muqdisho. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa maanta oo Axad ah u duulay magaalada Muqdisho iyada oo ay soo aadantahay doorashada madaxweynaha Soomaaliya.
Cabdiweli Maxamed Cali ayaa gudaha Muqdisho kula kulmi doona xildhibaanada Puntland u matalaya aqalka hoose iyo aqalka sare ee Soomaaliya, sida ilo-wareedyo codsaday in aan magacooda la sheegin u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Ilo-wareedyada ayaa sheegay in madaxweynaha uu xildhibaanada ka codsan doono in ay codka siiyaan musharax asal ahaan kasoo jeeda Puntland.
Raysulwasaaraha hadda xafiiska jooga Cumar Cabdrashiid Cali Sharmaake iyo madaxweynaha iminka Xasan Shiikh Maxamuud ayaa kamid ah 23 musharax oo u tartamaya madaxweynenimo.
Warsidaha Puntland Mirror ayaa ogsoon in madaxweynaha Puntland uu taageerayo raysulwasaare Cumar Cabdirashiid, oo kasoo jeeda Puntland oo kutaala waqooyiga-bari Soomaaliya.
Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhici doonta 8-da bishaan Febaraayo.